Sports News | खेल संसार
विश्वकपमा पत्रकारहरु लुटिए
मेचीकाली : 2010-06-14 09:04:44
दक्षिण अफ्रिका, ३१ जेठ दक्षिण अपि्रुकामा विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताको छायाँकनमा खटिएका न्यूजिल्याण्डका टेलिभिजन पत्रकारहरुको ७० हजार अमेरिकी डलर मूल्यको क्यामेरा र अरु उपकरणहरु त्यहाँका डाँकाहरुले लुटेका छन् । उत्तर पश्चिम रुस्तेनवर्ग सहरमा यो घटना भएको थियो जहाँ स्लोभाकियासँग एक खेल भएको थियो । टेलिभिजन पत्रकारहरु रातिको खाना खाइरहेका बेला लुट्ने काम भएको थियो । त्यहाँको प्रहरीले यो घटनाको पुष्टि गरेको छ ।
घाना १-०ले विजयी
एजेन्सी: 2010-06-13 21:41:11
बनेपा, ३० जेठ विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएको दोश्रो खेलमा घाना १-० ले विजयी भएको छ । सर्बियासँग भएको खेलमा खेलको ८५ औं मिनेटमा घानाका आसामो ज्ञानले निर्णायक गोल गरे । घानाको यो दोश्रो विश्वकप हो । ४ बर्षअघि जर्मनीमा भएको विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै घानाले अन्तिम १६ को यात्रा गरेको थियो ।
स्लोभानियाले जित्यो अल्जेरियालाई
मेचीकाली : 2010-06-13 19:17:09
बनेपा ३० जेठ स्लोभानियाले दक्षिण अफ्रिकामा जारी १९ औँ विश्वकप फुटवल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ । प्रतियोगिताको तेस्रो दिन आइतबारको पहिलो खेलमा अल्जेरियालाई एक शून्य गोलको अन्तरले पराजित गर्दै स्लोभानियाले विजयी सुरुवात गरेको हो ।
भारत विश्वकपमा पुगेको भए?
मेचीकाली : 2010-06-13 19:11:07
भारतका टेलिभिजन च्यानलमा छलफलको विषय हुने थियो– 'के भारतमा फुटबल विकास नै क्रिकेटको पतनका लागि जिम्मेवार छ।' यस्तो उपलब्धी भारतीय फुटबल टोलीले प्राप्त गरेको भए पूर्व भारतीय फुटबल खेलाडी टेलिभिजन कमेन्टेटर बन्नका लागि अंग्रेजी सिक्न जान्थे। क्रिकेटका लागि मरिहत्ते गर्ने भारत यदि यस पटकको विश्वकप फुटबलमा पुगेको भए के हुने थियो? यस रोचक प्रश्न र त्यसको जवाफ खोजेको छ गोल इन्डिया डट कमले! क्रिकेटको पूर्वविश्वविजेता भारतको प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यदि दक्षिण अफ्रिकामा जारी फुटबलको महाकुम्भमा भारतीय टिम पुग्न सकेको भए?
स्लोभानियालाई एक गोलको अग्रता
मेचीकाली : 2010-06-13 19:04:55
बनेपा ३० जेठ दक्षिण अफ्रिकामा जारी १९ औँ विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताको तेस्रो दिनको पहिलो खेलमा अहिले अल्जेरिया र स्लोभानियावीच प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको पेटर मोकाबा रंगशालामा जारी खेलमा स्लोभानियाले एक गोलले अग्रता लिएको छ । स्लोभानियाका जर्सी नम्बर ८ का रोवर्ट कोरेनले दास्रो हाफको ७९ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेर टीमलाई अग्रता दिलाएको हो ।